5 सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न
पढ्ने समय: 8 मिनेट(Last Updated On: 30/10/2020)
केही दिनको लागि टाढा रही सोच? योजना के पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न केही दिन यात्राको? फ्रान्सेली रेल छिटो हो, सजिलो, र पर्यावरण-मैत्री मार्ग फ्रान्स मा वरिपरि प्राप्त. संग एक ट्रेन सेव, तपाईं कुनै जोडी शुल्क संग मिनेटमा बुक गर्न सक्षम, धेरै! कुल!
पेरिस धेरै राम्रो फ्रान्स र धन्यवाद सबै संग जोडिएको छ TGV रेल (एक ग्रान्ड VITESSE तालिम) केही को5बाट सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको पेरिस मा सम्भव छ4घण्टा वा कम! यहाँ यात्राहरूको बारेमा हाम्रो अनुसन्धान हो जुन तपाइँ पेरिसको यात्रामा गर्नुपर्दा विचार गर्नुपर्छ.
1. यात्राको रेल MARSEILLES यात्रा गर्न (प्रोभेन्स-Alpes-कोटे Azur)
तपाईं पेरिस देखि एक घाम Getaway खोजिरहेको भने, Marseilles जाने ठाउँ छ. राम्रो हुनत छिटो कार्य, को घाम दिन चाँडै अन्त आउँदै गरिनेछ. Marseilles नक्सामा टाढा देखिन्छ तर Marseilles गर्न पेरिस मात्र हो 3.5 को TGV संग रेल द्वारा घण्टा. Marseilles, मा प्रोभेन्स-आल्प्स-कोटे Azur क्षेत्र, फ्रान्सेली रिवेरा को भाग हो. धेरै मानिसहरू Marseilles कोर्सिका द्वीप आफ्नो बाटो मा चाँडै भ्रमण तर शहर आफैं अन्वेषण गर्न एक सुन्दर ठाउँ छ.
तपाईं Marseilles किन भ्रमण गर्नुपर्छ?
को मौसम Marseilles ठूलो छ प्लस त्यहाँ कुराहरू धेरै छन् मा हेर्न र शहरमा गर्न. केन्द्रीय Marseilles शहर को ठाँउहरु को सबै भन्दा केंद्रित, जस्तै सुरम्य पुरानो पोर्ट रूपमा. मार्सेइल विशाल आयताकार पोर्ट लागि व्यापार गरिएको छ 2,600 वर्ष र एक दृष्टि भन्दा सारा जिल्ला बढी छ.
तीन पक्षले संलग्न ज्यादातर 18 औं शताब्दीका पूर्व भंडारगृहों व्यापक promenades संग quays छन्.
लगभग यी हरेक एक छ जस्तो देखिन्छ क्याफे, माछा रेस्टुरेन्ट, वा यसको भूमि तल मा पल्ट, बाहिर बस्ने तपाईंलाई यो enchanting शहर मा जीवन देख्न सक्छन् त तपाईं एक pastis नर्स रूपमा फैलाउनु.
उद्योग लामो गर्न नाउ गर्न आधुनिक नाउ सारिएको छ उत्तर, र पुरानो पोर्ट मा डुङ्गा को सबै भन्दा खुशी को लागि हो.
तर भित्री Quai des Belges मा, नवीनतम क्याच अझै पनि हरेक बिहान द्वारा पानी माछा बजार मा बेच्न गर्न किनारामा ल्याइएको हो.
पेरिसबाट यस दिनको यात्रा ट्रेन द्वारा सिफारिस गरिएको छ.
गार्ड को लेडी हाम्रो basilica
यो पुरानो पोर्ट को दक्षिण गर्न क्षितिज माथि बढ्दो यो स्मारक सम्झना गर्न कठिन छ.
यो एक 19 शताब्दीका नव-Byzantine छ चर्च 150 पानी माथि मीटर, यसको टावर माथि एक ठूलो सुनको को भर्जिन को मुर्ति र बाल संग Marseilles समुद्री समुदाय माथि हेर्न.
त्यहाँ ला गार्ड मा धार्मिक अभयारण्य र watchtowers धेरै शताब्दीयौंदेखि भएको थियो, र Basilica पनि मण्डप समावेश एक पुनर्जागरण फोर्ट तल्लो स्तर शामिल.
यो आरोहण गर्ने मा हल्कासित लिएको छैन गर्न सकिन्छ गर्मी, तर त्यहाँ एउटा पर्यटक रेल पुरानो पोर्ट देखि नियमित प्रस्थान.
भन्न अनावश्यक, को दृश्यहरु यहाँ बाट चिबुक-गिर छ.
ट्रेन द्वारा Marseilles गर्न पेरिस
Marseilles मा स्थित छ 773 पेरिस को दक्षिण मी. Marseilles गर्न पेरिस रेल यात्रा गर्न यात्रा धेरै सजिलो छ. Marseilles गर्न गाडिहरु पेरिस को एउटा यात्रा लागि छोडेर पेरिस Gare de लियोन 3.5 घण्टा. तपाईं Marseilles यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्मी सप्ताहन्तमा हामी सुझाव दिन्छौं रेल टिकट बुकिंग राम्रो अग्रिम.
2. यात्रा Rouen (नोर्माण्डी)
नदी द्वारा स्थित आफ्नो, रुवन पेरिसबाट नजिकको यात्रा हो र नर्मन्डीको प्रशासनिक राजधानी हो. उपनाम "को शहर 100 घण्टी टावर”. रोयुन छ एक धनी इतिहास, रोचक संग्रहालय, र राम्रो gastronomy होट्ल.
रोयुन को को छ सबैभन्दा सुन्दर छोटो5पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राको. कारण राजधानी यसको छोटो दूरी गर्न (126 मी), धेरै मानिसहरू पेरिस दिन यात्राहरूमा रोयुन भ्रमण तर यो थप केही घण्टा भन्दा पाउनुपर्ने शहर छ.
कि तपाईंले केही वनस्पति उद्यान हेर्न चाहनुहुन्छ, जो को रोलिङ पहाड अन्वेषण गर्न एक आधार छ नोर्माण्डी क्षेत्र, या बस केही cityscapes स्न्याप गर्न चाहनुहुन्छ (काठ-फ्रेम FACADES संग पूरा), कुनै रोयुन अविश्वसनीय राम्रो छ भनेर इन्कार त्यहाँ!
भर इतिहास, शहर राम्रो एक शानदार भइरहेको लागि दस्तावेज गरिएको छ कला दृश्य, अझै पनि यो दिन साँचो हो जो केहि. 20 औं शताब्दीका समयमा, क्लाड Monet को लाइक, धेरै अरूलाई साथै, शहर ventured र पनि शहर रंग गर्न प्रेरित थिए.
अब, रोयुन गरेको सडकमा थुप्रै pedestrianized रहनेछ, शहर मार्फत टहलने साँच्चै समय फिर्ता stepping गर्न akin महसुस भनेर अर्थ. कुनै कार, cobbled सडक खण्डहरू, एक बंदरगाह क्षेत्र, र पनि एक प्राचीन जिल्ला: के प्रेम होइन? समयमा जुन-सेप्टेम्बर रोयुन भ्रमण र तपाईं पनि गिर्जाघर मा निःशुल्क रोशनी प्रदर्शनमा उपचार गरिने जब सूर्य सेट र धुलो सेट.
ट्रेन द्वारा रोयुन गर्न पेरिस
रुएन अवस्थित छ 126 पेरिस बाट मी. रोयुन गर्न पेरिस रेल यात्रा गर्न यात्रा धेरै सजिलो छ. रोयुन बिदा गर्न पेरिस गाडिहरु पेरिस सेन्ट Lazare ट्रेन स्टेशन प्रतिघण्टा. यात्रा 1 घण्टा लाग्छ 15 1 घण्टा मिनेट 45 मलाई, रेल आधारमा.
3. यात्रा ल्यों (अउवर्ङने - रोन आल्प्स)
लियोन, फ्रान्स तेस्रो-सबै भन्दा ठूलो शहर, फ्रान्स भ्रमण गर्न शीर्ष शहर मध्ये एक छ. शहर राम्रो जीवनको यसको गुणस्तर लागि जानिन्छ, समकालीन गर्न रोमन पटक एक सुन्दर सम्पदा वास्तुकला, र राम्रो gastronomy होट्ल.
तपाईं लियोन किन भ्रमण गर्नुपर्छ?
लियोन को को छ फ्रान्स सबैभन्दा सुन्दर शहर, जस्तै रमाइलो गर्न गतिविधिहरु को एक असंख्य छ. Fourbiere हिल प्रस्ताव सुन्दर मनोरम दृश्य शहर र यसलाई आफ्नो यात्रा सुरु गर्न ठूलो ठाउँ छ. अन्वेषण व्यू लियोन, शहरमा ऐतिहासिक केन्द्र र यसको पिटाई हृदय, संग रोचक मध्ययुगीन र पुनर्जागरण वास्तुकला र एक राम्रो वातावरण. लियोन गरेको बदनाम भोजन को एक स्वाद प्राप्त गरेपछि, यो टाउको समय छ को प्रायद्वीप (लियोन गरेको नदी-बाध्य प्रायद्वीप) थप सुन्दर वास्तुकला र केही लागि राम्रो किनमेल.
ट्रेन द्वारा लियोन गर्न पेरिस
लियोन अवस्थित छ 463 पेरिस बाट मी, यस दिन पेरिस बाट यात्रा, फ्रान्स मा दोस्रो ठूलो शहर मा तपाइँ लाई परिचय गराउने छ जुन पेरिस भन्दा धेरै भिन्न छ. लियोन गर्न पेरिस रेल छिटो छ द्वारा यात्रा गर्न यात्रा. लियोन बिदा गर्न पेरिस गाडिहरु पेरिस Gare de लियोन एक लागि प्रतिघण्टा यात्रा को आसपास2घण्टा, रेल आधारमा.
4. यात्रा ला रशैल (नयाँ एक्विटेन)
ला रशैल र आफ्नो द्वीप भविष्यमा तिर गरिएका एक भन्दा बढी हजार वर्ष पुरानो सहरको छन्! एटलांटिक Seafront को हृदयमा Nestled, शहर ठूलो आर्थिक मा यसको समुद्री आधार परिवर्तन गरेको छ, पर्यटक, र सांस्कृतिक सम्पत्ति, जबकि यसको अद्वितीय सौन्दर्य कायम राख्न.
तपाईं लारोचेले किन भ्रमण गर्नुपर्छ?
पुरानो पोर्ट देखि, एक मात्र राजसी टावर पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ, शहर को अभिभाबकहरुको. एटलांटिक सामना, तिनीहरूले शताब्दीयौंदेखि मार्फत लारोचेले शक्ति र धन साक्षी गर्नुभएको. यी समुद्री fortifications, मध्य युग र आज ऐतिहासिक स्मारक रूपमा वर्गीकृत निर्माण, तपाईं लारोचेले भ्रमण गर्दा बाहिर खडा. बंदरगाह प्रवेश प्रत्येक पक्षमा, को सेन्ट-निकोलस टावर, र दल को टावर एक पर्खाल गरेर जोडिएको छ. अन्तमा, त्यहाँ लालटेन को टावर छ, पूर्व एक प्रकाशस्तम्भ र जेल.
को Ile de पुन भ्रमण:
को बोइस-Plage-एन-पुन द्वीप को दक्षिण तट मा स्थित पुरानो मध्ये एक छ समुद्र तटीय रिसोर्ट्स फ्रान्समा. सागर लागि खुला, शहर गुणस्तर गर्व छ यसको समुद्र तट. यो निलो झण्डा सम्मानित गरियो 2015 (उदाहरणीय coastlines चिनारी). मार्फत गाउँ भ्रमण यसको alleys र सडकमा घुमावदार, आनंद से मई देखि सेप्टेम्बर hollyhocks संग लहरै.
ट्रेन द्वारा लारोचेले गर्न पेरिस
लारोचेले मा स्थित छ 469 पेरिस बाट मी. लारोचेले गर्न पेरिस रेल सजिलो छ यात्रा गर्न यात्रा. लारोचेले बिदा गर्न प्रत्यक्ष TGV रेल पेरिस Gare de Montparnasse देखि र मात्र लारोचेले गर्न पेरिस लिङ्क3घण्टा.
5. यात्राहरू हाम्रो अन्तिम विकल्प ट्रेन ड्यूविल यात्रा गर्न (नोर्माण्डी)
ड्यूविल को नोर्माण्डी तट मा पाइन्छ, Trouville र दक्षिण-पश्चिम आसन्न Honfleur. को 'नोर्माण्डी रिवेरा' ड्यूविल को एक भाग एक सुन्दर समुद्र-साइड शहर छ. यो एक ठूलो समुद्र तट छ, ठूला ठूला भवनहरू, ठूलो पसलहरूमा, र वार्षिक फिलिम तिहार. यसको प्रसिद्ध जाति-ट्रयाक उल्लेख छैन, गोल्फ कोर्स साथै क्यासिनो. के थप तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ?
डेउभिले पेरिसबाट एक दिन यात्राको लागि एक महान उम्मेदवार हो, तेस्रो नेपोलियनको सौतेनी भाइको दर्शनको रूपमा जीवन सुरु भयो. Trouville को आसन्न शहर देखि, उहाँले marshes र टिब्बा मार्फत देख्यो र एक जाति-ट्रयाक निर्माण गर्ने निर्णय. सुरुचिपूर्ण विला दौड-ट्रयाक र समुद्र बीच निर्मित थिए र ड्यूविल जन्म भएको थियो.
सुरुमा स्थापित र 19 औं शताब्दीमा विकसित हुनत, यसलाई विकास दोस्रो लहर ड्यूविल मा भयो कि प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीमा भएको थियो. यो तट साथ प्रसिद्ध बोर्डवक समावेश, को परिष्कृत क्यासिनो, र महान् होटल. होटल नोर्माण्डी र शाही होटल, र गोल्फ कोर्स.
ट्रेन द्वारा ड्यूविल गर्न पेरिस
ड्यूविल स्थित छ 220 पेरिस को पश्चिम मी. ड्यूविल गर्न पेरिस रेल यात्रा गर्न यात्रा साँच्चै सजिलो छ. प्रत्यक्ष ड्यूविल बिदा गर्न पेरिस गाडिहरु पेरिस सेन्ट Lazare प्रतिघण्टा रेल स्टेशन र रेल यात्रा रहन्छ2घण्टा.
भन्न हो (हो फ्रेंच) गर्न5पेरिसबाट सर्वश्रेष्ठ दिनको यात्राको साथ ट्रेनको साथ यात्रा एक ट्रेन सेव! कुनै अतिरिक्त, लुकेका शुल्क, कुनै जायका. रमाइलोको!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml र तपाईं / RU गर्न / डे परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वा / NL र अधिक भाषा.
#daytrip #FrenchHolidays #paristrips #quicktrips #tripsfromparis europetravel longtrainjourneys रेल सुझावहरू रेल यात्रा